သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း| January 24, 2013 | Hits:2,194
မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 25, 2013 - 4:04 am အမေရိကားမှာ ဆင်စွယ်ကို ပေးတောင် မသွင်းဘူး။ ဗမာပြည်က ဆင်ရိုးနဲ့ လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေတောင် ယူလို့ မရဘူး။ အမေရိကားတို့ အင်္ဂလန်တို့ ပြင်သစ်တို့က တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့တွေ အကြောင်းကြားလိုက်ရင် သူတို့ ထအော်ပါလိမ့်မယ်။
Reply Lailun January 25, 2013 - 7:42 am Oh Man! Heartbreaking. If Chinese are not buying, who will want to kill these elephants. Tigers are gone, Elephants will be gone. Why don’t the Chinese take home our generals, ex-generals, their family members and cronies? My dog is much more loyal to Burma than the current junta.
Reply မင်းအားကောင်း January 25, 2013 - 11:14 am သောက် ရူး တွေ ငတုံး ငမိုက် ငမွဲ အကောင်တွေ